Ukucaca Kuhlasela Ukukhungatheka Kwezingcingo Ekuxhumaneni | Martech Zone
Umngane wami omuhle iminyaka eminingi ngu USteve Woodruff, ozimemezele (futhi onekhono kakhulu) Ukucaca Kwezobuchwepheshe, iyaqhubeka nokwabelana ngokuthengisa okungenangqondo phakathi kwamawebhusayithi namaphrofayli wezokuxhumana. Wabelana nokwakhe intandokazi yesikhathi sonke nami kusuka eminyakeni embalwa eyedlule:
Siphayone imodeli entsha yokukhula okusimeme, okuqhutshwa ngabathengi ngokuya ngemigomo yezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokuguquguquka. Lesi yisisekelo esisha secebo lomhlaba obhekene noshintsho olujulile lokwakheka: ukucabanga okuhlukile mayelana nokwakha inani, indlela eyahlukene emakethe nasekuthuthukisweni kwebhizinisi, ifreyimu ehlukile yokubona nokucabanga. Ama-ecosystems ayisisekelo esisha sokuncintisana. Izinkampani ezazi ukuma nokuzibamba njengamapulatifomu wokuzihlela zingenza ukukhula okufana ne-Google kucishe kuqhutshwe ithempulethi.
Kusho ukuthini lokho? Maningi amagama futhi anginankomba.
Bengizimisele ukubhala lokhu okuthunyelwe isikhashana, futhi izolo omunye umngani wami omuhle, UMark Schaefer, kwaba yisisusa. Maka okwabelwana umugqa we-Palmolive ophawulwe ngokuhweba, Uhlasela i-Grease ku-Contact.
Ngakho-ke igama lalokhu okuthunyelwe… Ngiyethemba uMark akanandaba nokuthi ngintshontshe lo mbono kokuthunyelwe kwakhe ku-Facebook. O, futhi kufanele kuqashelwe ngokufanele ukuthi isizinda sikaMark webusiness.com… Ngabe kuyacaca yini kunalokho?
Ukwabelana kukaSteve kwezenhlalo sekungaphezu konyaka kungiqaqa. Iwebhusayithi yethu ye-ejensi yayiyiqoqo lemisho ejwayelekile ye-buzzword engaqhakambisa isiqubulo esimangalisa kakhulu. Ngaso sonke isikhathi lapho uSteve ehlanganyela inkulumo engenangqondo evela kuwebhusayithi, ngangizithola ngivula isiphequluli ukuze ngiqiniseke ukuthi akasitholi Highbridge!
Ngenxa yalokho, ngashukumiseleka ukuba silungise ikhasi lasekhaya. Ngaya ekhanda lami ukuthi kungani izinkampani ziqhubeka nokusebenzisa i-ejensi yethu, futhi konke kweza entweni eyodwa… silungisa okwephukile ngokukhangisa kwabo online. Kepha akuyona into eyodwa ngaso sonke isikhathi… kwesinye isikhathi kungukubeka uphawu, kwesinye isikhathi amakhophi abo, kwesinye isikhathi isikhundla sabo sosesho. Ngenxa yalokho, ngabhala umbhalo omncane omuhle ovele ubeke igama elilodwa emshweni.
I-verbiage entsha, echazwe ngokucacile, ithi:
I-Digital Marketing yakho ayishayeli __________. Siyakulungisa lokho.
Amagama esijova ngawo Imiphumela, idumela, amazinga, izivakashi, igunya, ukuhola, abalandeli, imali engenayo, ukulandwa, ukuzibandakanya, ukungena ngemvume, i-ROI, okulindelwe, ukuguqulwa, ukufunda, ukusetshenziswa, ababukeli, ama-upsell, abalandeli, ukusebenza, ukuthengisa, ukugcinwa, ukubhaliswa, inzuzo, Ukuqwashisa, futhi Ukufuna.
Vele, ngingaqhakaza ngenqubo yethu efakazelwe, esalinde ilungelo lobunikazi yokwandisa ukuvuthwa kokumaketha kwamakhasimende ethu (indaba eyiqiniso)… kepha lokho empeleni kuyini Kusho? Kusho ukuthi silungisa okungalungile. Kukho konke ukuhlanganyela esinakho, lokho kugxilwa kithi nokuthi yini esifuna ukuthi amaklayenti ethu agxile nakuyo. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi sikhomba izikhala kumasu abo wokumaketha, futhi sibasize ukuthi bagcwalise lezo zikhala ukuqhubela phambili ibhizinisi labo.
Angazi ukuthi ukuzivocavoca ukuze ngithole ukukhuluma okucacile, okucacile kwakumayelana nokususa noma ukunciphisa amagama. Lokho kungaba ukuzivocavoca okungakusiza ukuthi wenze ukucaca ngezinto zakho zokuthengisa nezentengiso. Ngiyakholelwa ukuthi inqubo engidlule kuyo ibigxile kulokho esikufezile kumakhasimende ethu kunokugxila ekutheni singobani nokuthi yini esikwaziyo ukuyenza. Eminyakeni edlule, ngabhala ngezinkampani zobuchwepheshe njalo izici zokumaketha ngaphezu kwezinzuzo.
Lapho ugxile kulokho okwazi ukukwenza kunalokho okufeza amaklayenti akho, ngicabanga ukuthi lapho ukwenziwa kwamagama kuhamba kabi!
Tags: IgunyaUkuqwashisaUkucacaukuguqulwaukukopishaUkufunaokulandwayolwekucocisanafansabalandeliimikhondoUMark SchaeferukusebenzainzuzoamathembarankingsUbufundiukubhaliswaidumelaImiphumelaukugcinwaImali engenayoRIOUkunika Amandla UkuthengisaBhalisasteve izinkuniOkuthengiswayoUkusetshenziswaAbabukeliizivakashi
I-Brand24: Ukusebenzisa Ukulalela Komphakathi Ukuvikela Nokukhulisa Ibhizinisi Lakho
Dec 22, 2016 ku-11: 52 AM
Ngiyakuthanda okwenzile ngekhasi eliyisiqalo - ikakhulukazi i- “carousel” yokushintsha amagama, obekungumqondo engingakaze ngiwubheke ngaphambili. Qina!
UJeffry Pilcher | Umkhiqizo Wezezimali
Dec 26, 2016 ku-11: 07 AM
Abakhangisi abasesigabeni sezimpahla / zabathengi bayakuqonda ukuthi okuthengisayo kufanele kuxazulule izinkinga zabantu. Ukumaketha kwakho kufanele kuchaze inkinga futhi kunikeze isixazululo kahle - imvamisa kungaphansi kwamagama ayi-5-10. Ngesizathu esithile, abathengisi be-B2B abakuqondi lokhu. Ezimweni eziningi, imilayezo yokukhangisa eqinisekisiwe kakhulu ivela kulezo zixazululo zokuthengisa ezithengisayo.
Abaphathi abakhulu nababhali bamakhophi ezinkampanini zokumaketha bathanda amatemu amakhulu ngoba kwenza umsebenzi wabo uzwakale ujule kakhulu (futhi bacabanga ukuthi bangakhokhisa kakhulu ngawo). Ngokwethembeka, iningi alinakho ukucacelwa kwenhloso futhi alinakho ukuzethemba ukwenza izethembiso ezinesibindi - isib. “Sizokusiza ukuxazulula inkinga X.”
Uma ungeke ungitshele - ngomusho owodwa nangesiNgisi esicacile - ukuthi uzongenzela ini, ibhizinisi lami noma umndeni wami, usenomsebenzi omningi osamele uwenze.